Tadiavo ny Battle Star miafina eo amin'ny efijery fandefasana ao amin'ny Fortnite Season X. | la-manette.com
Tadiavo ny Battle Star miafina eo amin'ny efijery fandefasana ao amin'ny Fortnite Season X.
27 février 2021 25 février 2021 feh JEAN-MICHEL CAPPIN
Fortnite's Secret Battle Stars sy Season X Loading Screens nohazavaina.
Isan-kerinandro in Fortnite, azo vahana amin'ny famitana fanamby sasany ny efijerin'ny entana vaovao. Raha mijery akaiky an'ireo efijerin'ny entana ireo ianao, dia manondro ny toerana misy ny Secret Battle Star na Banner slot eo amin'ny sarintany.
Ny Secret Battle Stars sy ny Loading Screens dia miasa hafa kely ao amin'ny Fortnite Season X. Raha tokony ho voafatotra amin'ny famitana ireo fanamby rehetra ao anatin'ny herinandro manokana izy ireo, dia mipoitra ao anatin'ny fanamby voafetra amin'ny fotoana izy ireo, manamora ny famahana sy ny fitadiavana azy ireo.
Ireto misy ohatra amin'ny endrik'izy ireo amin'ny fanamby amin'ny fotoana voafetra ao anatin'ny tapa-bolana voalohany (misaotra an'i ItzBullzye amin'ny reddit sy ny ZBG amin'ny reddit noho ireto ohatra ireto):
Amin'ny fitadiavana Star Stars fanampiny amin'ny lalao dia hahazo ambaratonga fanampiny ianao amin'ny fandrosoanao amin'ny Season Battle Pass. Azonao atao ihany koa ny maka sora-baventy vaovao, izay hanome anao safidy fanamboarana vaovao.
Toy ny tamin'ny valisoa teo aloha, dia tsy maintsy nanokatra ny efijery fandefasana entana ianao vao hiseho eo amin'ny sari-tany. Satria fotoana voafetra ihany no hisehoan'izy ireo, ataovy azo antoka fa manana azy ireo ao amin'ny lisitrao ianao alohan'ny hanjavonany. Saingy rehefa manana izany ianao dia manana hatramin'ny faran'ny vanim-potoana hahazoana azy.
Izany angamba no mahatonga ny tsy fisian'ny hoditra bonus faran'ny vanim-potoana izay hisokatra raha hitanao izy rehetra.
Ny vanim-potoana faha-4 ka hatramin'ny faha-9 dia nanana ireto hoditra ireto, samy nomena anarana hoe The Visitor, The Executor, AIM, The Prisoner, ary Ruin and Singularity.
Toy ny mahazatra, manana hatramin'ny faran'ny vanim-potoana ianao hanokatra ny efijery mavesatra isan-karazany sy ny hoditra Utopia, raha tsy izany dia ho foana mandrakizay izy ireo. Mirary anao ho tsara vintana !
Vakio ihany koa: Fandraketana efijery amin'ny Samsung Galaxy A21s
Sarintanin'ny toerana tsiambaratelo Fortnite Battle Star
Na inona na inona filaharan'ny fanangonanao ny efijery fandefasana entana, dia hitovy ny filaharan'ny efijery fandefasana Season X sy ny toerana misy ny Battle Star.
bola sary : Eurogamer
Tadidio fa raha manokatra mihoatra ny iray ianao dia azonao atao ny manangona azy ireo amin'ny filaharana tianao.
Fortnite Secret Battle Star Location 1 eo amin'ny efijery Loading
Ity toerana miafina Battle Star ity dia hita ao amin'ny efijery fanamby fanamby BRUTE Squad mandritra ny herinandro 1.
Hita ao amin'ny lavaka miendrika elo any amin'ny tapany avaratry ny sarintany, eo atsimon'ny The Block.
Mankanesa miankandrefana avy eo ary tadiavo ny toerana ao anaty loto mba hahitana ny toerana misy ny Battle Star.
Toerana Secret Battle Star eo amin'ny efijery fandefasana Fortnite 2
Ity toerana miafina Battle Star ity dia hita ao amin'ny Shootout amin'ny Sundown Week 2 fanamby famandrihana efijery.
Amin'ny ankapobeny dia hita eo amin'ny tapany ambany amin'ny sarintany izy io, eo anelanelan'ny Salty Springs sy ny Fatal Fields.
Rehefa tonga any ianao, ny kianjan'ny tany eo anelanelan'ny lavaka roa dia hanolotra anao ny miafina Battle Star.
Fortnite Secret Battle Star Loading Screen Slot 3
Ity toerana miafina Battle Star ity dia hita ao amin'ny efijery famandrihana herinandro 3 an'ny The Leftovers challenge set.
Mankanesa any amin'ny Glacier Sofdeez, izay eo ambanin'ny Paradise Palms, eo amin'ny lalana miankavia amin'ny lalana mihazakazaka.
Manatona ny fivarotana ary midira ao anatiny.
Hahita ny Battle Star ao ambadiky ny kaontera ianao, eo akaikin'ny fanariana rano sy ny vata fampangatsiahana zava-pisotro.
Fortnite Battle Star Secret Loading Screen Slot 4
Ity toerana miafina Battle Star ity dia hita ao amin'ny efijery fanamby fanamby Junk Storm Week 4.
Vakio ihany koa: Ahoana no ahafantaranao hoe iza no ao ambadiky ny antso tsy fantatra?
Hita any atsinanan'i Sunny Steps izy io, eo amin'ny havoana misy tempoly kely.
Midina ary kendreo ny toerana ifanenan'ny grid, eo afovoany.
Fortnite Secret Battle Star Loading Screen Slot 5
Ity toerana miafina Battle Star ity dia hita ao amin'ny efijery fampakarana ny andiany fanamby Catastrophic Week 5.
Mipetraka eo akaikin'ny trano eo an-tampon'ny tendrombohitra avaratrandrefan'i Fatal Fields izy io.
Fortnite Secret Battle Star Location 6 eo amin'ny efijery Loading
Ity toerana miafina Battle Star ity dia hita ao amin'ny efijery famandrihana fanamby amin'ny Week 6 Comeback.
Mankanesa any amin'ny Fatal Fields, izay misy dobo any atsimo. Hahita ny Battle Star eo amin'ny pier ianao eo amin'ny sisiny.
Fortnite Loading Screen Secret Battle Star Location 7
Ity toerana miafina Battle Star ity dia hita ao amin'ny efijery famandrihana ny andiany fanamby Slurp Summer Week 7.
Mankanesa any Greasy Grove, ary midira ao amin'ny cafeteria afovoany, izay hiseho eo amin'ny sisiny akaikin'ny varavarankely.
Fortnite Secret Battle Star Loading Screen Slot 8
Ity toerana miafina Battle Star ity dia hita ao amin'ny efijerin'ny fanamby Gothic Week 8.
Mankanesa any amin'ny loharano mafana any avaratratsinanan'ny sarintany, ary eo atsimo dia misy tilikambo. Ny Week 8 Battle Star dia hiseho eo amin'ny vavahady iray eo.
Fortnite Secret Battle Star Loading Screen Slot 9
Ity toerana miafina Battle Star ity dia azo jerena ao amin'ny efijery fampidinana ny andiany fanamby amin'ny herinandro 9 Vonona na Tsy…
Vakio ihany koa: Ny écouteur sy écouteur manafoana feo tsara indrindra
Mankanesa any amin'ny tranobe Tomato Head izay eo anelanelan'ny Lazy Lagoon sy Pressure Plant. Ny Week 9 Battle Star dia hiseho eo an-tampon'ity tranobe ity.
Aiza ny efijery fandefasana Fortnite Battle Star miafina mandritra ny herinandro 10?
Tsy misy toerana miafina ho an'ny Herinandro 10 Battle Star, ka rehefa manana ny sivy teo aloha ianao dia vonona amin'ity vanim-potoana ity.
Nampidirina vao haingana tao amin'ny lalao ny Program Referral Friend sy Cube Queen skin. Ny fikarohana vao haingana dia ahitana Touch a Cube, Spirit Ship Guardian Footprints, Command Signal, Scroll Slots, Mini Pumps, seismographs, signes of Ghostbusters ary ny fametrahana fandrika matoatoa ho an'ny manampahaizana manokana momba ny fitahirizana. Any amin'ny toerana hafa amin'ny vanim-potoana 8, afaka manomboka mampiasa fitaovam-piadiana ianao, mandray anjara amin'ny fihaonana amin'ny Sideways, ary mahita tavoahangy miloko ho an'ny Tonna Fish.
Ny fifanarahana Black Friday tsara indrindra amin'ny 2021